တရုတ် Shen Qu ဆေးဖက်ဝင် ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Shen Qu ဆေးသည် ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သည်။
တရုတ်အမည်: Shen qu
အသုံးပြုမှုအပိုင်း- Polygonum hydropiper နှင့် အခြားဆေးဝါးများသို့ ဂျုံမှုန့် သို့မဟုတ် ဂျုံဖွဲနုတို့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။
အဓိကလုပ်ဆောင်မှု- သရက်ရွက်နှင့် အစာအိမ်၊ အစာခြေခြင်းနှင့် စုစည်းမှု
မြင့်မြတ်သောဟာသ၊ တရုတ်ဆေးပညာအမည်။Polygonum hydropiper၊ Artemisia annua၊ ဗာဒံသီးငါးပိ၊ adzuki bean နှင့် လတ်ဆတ်သော Xanthium sibiricum သို့ ဂျုံမှုန့် သို့မဟုတ် ဖွဲနုတို့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အချဉ်ပေါက်သည်။၎င်းကို နိုင်ငံအနှံ့ ထုတ်လုပ်သည်။၎င်းသည် စတုရန်း သို့မဟုတ် စတုဂံဖြစ်ပြီး အကျယ်3စင်တီမီတာနှင့် အထူ 1 စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်မှာ ကာကီ၊ စပါးကြမ်း၊ မာကျောပြီး ကြွပ်ဆတ်ကွဲလွယ်၊ မညီမညာသော အပိုင်းများ၊ မကြေမညက်သေးသော အဖြူနှင့် အညိုရောင် အကြွင်းအကျန်များနှင့် ထူထဲသော အချဉ်ဖောက်ထားသော အပေါက်များကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ထုံပြီး ခါးတယ်။
သရက်ရွက် နှင့် အစာအိမ် အစာမကြေခြင်း နှင့် စုပုံခြင်း ။
အစာမကြေခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
1. Zhizhu Pill - သရက်ရွက်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အစာအိမ် အားကောင်းစေပြီး လူကို ကြာရှည်စွာ မစားနိုင်ပါ။Atractylodes macrocephala koidz တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု (အဝါရောင်မြေဆီလွှာတွင် ကြော်ထားသော၊ မြေကြီးမှဖယ်ထုတ်ထားသော)၊ အရွယ်မရောက်သေးသော လိမ္မော်သီးတစ်လုံး သို့မဟုတ် နှစ်ခု (ဖွဲနုနှင့်ကြော်၊ ဖွဲနုမှဖယ်ထားသည်)။အဆုံးမှာတော့ ကြာရွက်ကို ထမင်းနဲ့ပြုတ်ပြီး အလုံးတွေကို ထောင်းပြီး အကြီးကြီးလုပ်ထားပါတယ်။ဟင်းရည်ဖြူ နဲ့ ဆေးပြား 50 သောက်ပါ။Qi တုံ့ဆိုင်းခြင်း, လိမ္မော်ခွံတစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုထည့်;မီးရှိလျှင် ကော့ပတစ် တစ်ချောင်း သို့မဟုတ် နှစ်ချောင်းထည့်ပါ။သလိပ်ရှိလျှင် pinellia ternata တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထည့်ပါ။အအေးမိပါက ဂျင်းခြောက်ငါးယွမ်နှင့် San Qian တို့ကို ထည့်ပါ။သင့်တွင် အစားအစာရှိပါက၊ Divine Comedy နှင့် Mai ကို ငါးခုစီ ထည့်ပါ။("Jie Gu Jia Zhen")
2. နွေရာသီတွင် ရုတ်တရက် ဝမ်းလျှောခြင်း- သရက်ရွက်ကို သန်မာစေကာ အစာအိမ် ပူနွေးလာခြင်းနှင့် အစားအသောက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ကုသပေးခြင်း။Qushu Pill- ၎င်းကို Divine Comedy (မွှေကြော်) နှင့် Atractylodes lancea (ထမင်းလိပ်များတွင် တစ်ညလုံးစိမ်၊ ဖုတ်) ဖြင့် နောက်ဆုံးအမှုန့်အဖြစ် ခွဲပြီး ဆေးလုံးကြီးတစ်ခုထဲသို့ ထည့်ပါ။တစ်ကြိမ်လျှင် ဆေးပြား 30 သို့မဟုတ် 50 သောက်ပြီး ထမင်းသောက်ပါ။("ဟေဂျီဗျူရို")
3. ခေါင်းလေနှင့် ဦးနှောက်နာခြင်း- ဝက်စပျစ် 10 ကီလိုဂရမ်၊ ရေကျောက်တစ်လုံး၊ ဖျော်ရည်သုံးပုံးနှင့် ကောက်ညှင်းပေါင်း သုံးပုံး၊အေးလာလျှင် ၉၂ ခုနှစ်အဆုံးတွင် မြင့်မြတ်သောဟာသကို မွှေကြော်ပြီး အိုးထဲသို့ထည့်ကာ ပုံမှန်အတိုင်း စပျစ်ရည်လုပ်ပါ။သုံးရက်၊ ငါးရက်လောက်ကြာတော့ အမြှုပ်တွေကုန်သွားတာမြင်တော့ ကောက်ညှင်းတစ်ပုံးကို ချက်ပြီး အအေးခံပြီး ပစ်ချလိုက်တယ်။မီးနည်းနည်းသောက်ပြီး သောက်ပြီးရင် ချွေးထွက်တယ်။("Shenghuifang")
လတ်ဆတ်သော Artemisia annua L.၊ လတ်ဆတ်သော Xanthium sibiricum L. နှင့် လတ်ဆတ်သော Polygonum hydropiper L. တစ်ခုစီကို 12 ကီလိုဂရမ်၊ဆေးပညာကွန်ရက်ဖြင့် ကြိတ်ချေထားသော ပဲနီစေ့များကို အခွံခွာပြီး ကြိတ်ချေထားသော ဗာဒံစေ့ ၆ ကီလိုဂရမ်ကို ကောင်းစွာရောမွှေကာ ဂျုံဖွဲနု ၁၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့် ဂျုံမှုန့်ဖြူ ၆၀ ကီလိုဂရမ်တို့ကို ထည့်ကာ သင့်လျော်သောရေပမာဏကို ထည့်ပြီး အတုံးများဖြစ်အောင် ဆုပ်နယ်ကာ ပြားပြားကပ်ကာ ကောက်ရိုး သို့မဟုတ် အိတ်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါ အပြင်ဘက်တွင် အဝါရောင် hyphae ပေါက်သောအခါ အချဉ်ဖောက်ပြီး ထုတ်ယူပါ။
ယခင်- ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောလက်ဖက်ရည်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် သန့်စင်သော သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Maca
နောက်တစ်ခု: Pi Pa Ye ရိုးရာတရုတ်ဆေး Loquat Leaf
tian xing ren လက်ကားကျန်းမာရေးဓာတ်ပျိုးပင်...
Xuan Shen လက်ကားရောင်းချသော တရုတ်ရိုးရာဆေး...
Sang Ye လက်ကားဆေးဖက်ဝင်အပင်စိမ်း Folium...
Fang Ji အစုလိုက် တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ အခြောက်လှန်း Stephania Tet...
Suo Yang တရုတ်သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ အရောင်းသွက်သော Herba Cy...
Che Qian Zi ၏ အာရှပျောစေ့ တရုတ် သူ...